Abavelisi bolusu | KwiChina Ukhathalelo lolusu abaXhasi kunye neFektri
Yintoni indima eyenziwa ngumlomo? Ekwindla, imozulu yomile, kananjalo ayinakho ukuxhasa ukufuma ngexesha elifanelekileyo, imilebe ikwabonakala ngathi yomile, okanye iyaxobuka, kunye nokucoca ulusu, hayi ukutsala ngesandla, kodwa ungasebenzisa iimveliso zamva nje, umlomo okrwayo. Inokususa ngokufanelekileyo i-cutin ye-labial Ministry.
Iqulethe i-2% yebhotolo ye-shea, isityalo sendalo sokuthambisa, ukubonelela ngesondlo esaneleyo kulusu.
Ikrimu yokukhuhla iinyawo
Oyile Shea ibhotolo: ukuthintela ukoma kunye nokuqhekeka, kulula ukuba ukufunxa kunye nokubuyisela, ugcine ulusu ukufuma kunye nokunwebeka, kwaye moisturize ngokunzulu.
Imaski yemilebe "yimaski", uninzi lweemaski zemilebe yezithako ezilula kunye nomaleko ofumileyo wezithako ezisebenzayo, ukuthambisa ukuthambisa yinjongo yokusebenzisa imaski yomlomo, ukususa i-cutin endala, ukubonelela ngesondlo kwimilebe kunye nokubengezela, ukuphela kombala womlomo.
Ikrimu yamehlo yokuguga
Umsebenzi ophambili we-polypeptide cream cream kukuncedisa isondlo kulusu lwamehlo, yenza ulusu lutyebile kwaye luqine, ukunciphisa ukubonakala kwemigca emihle kunye nemibimbi ejikeleze amehlo, gcina ulusu lutsha ...